Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Gudiga Fulinta ee Isbaahaysiga (PAFD) oo Asmara Ku Qabsoomay.
Shirkii Gudiga Fulinta ee Isbaahaysiga (PAFD) oo Asmara Ku Qabsoomay.
Posted by ONA Admin	/ March 28, 2016
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 28.03.2016ku qabsoomay magaalada Asmara ee caasimada wadanka Eritrea, shirkii ugu horeeyey ee Gudiga Fulinta ee Isbaahaysiga Shacabka ee Xoriyada iyo Dimuqraadiyada (PAFD).
Shirkan oo aad muhiim u ahaa, waxaa lagaga hadlay qorshayawga shaqo ee xafiisyada kala duwan ee uu ka kooban yahay isbaahaysiga PAFD.
Sidoo kale waxaa lagaga hadlay xaalada siyaasadeed ee Geeska Afrika gaaar ahaan mida Itoobiya. Kadibna wuxuu gudikasta oo ka tirsan xafiisyada uu isbaahaysigu ka kooban yahay soo bandhigay qorshe shaqeedkii uu ku hawl gali lahaa mudo sanad ah.
Dood dheer iyo falan qayn kadib, waxaa laysla meel dhigay nooca shaqo ee la qabanayo mudada sanadka ah hadii ay tahay dhanka
Ciidanka, Abaabulka, Siyaasada iyo aduunwaynaha usoo bandhigida qadiyada isbaahaysiga iyo barnaamijyadiisa siyaasadeed. Wuxuu gudiga fulintu ansixiyey dhamamaanba qorsho hawleedkii ay soo bandhigeen xafiisyadu.
Intaas kadib, waxaa aad looga dooday xaalada guumaysiga Ethiopia sida xasuuqyada kasocda gobalada Oramiya, Ogadeniya, Gambeela iyo
Benishaanguul, waxaana la soo bandhigay war bixino maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan dhibaatooyinka kajira gobaladaas iyo guud ahaanba Itoobiya.
Waxaana la isla meel dhigay sidii beesha caalamka loogu soo bandhigi lahaa xasuuqyada ka socda gobalada uu isbaahaysigani ka kooban yahay iyo guud ahaanba dhibka haysta shucuubta Ethiopia. Maadaama ay xukuumada wayaanuhu noqotay mid ku cimri dheeraysata,
daadinta dhiiga shacabka islamarkaasna ay dadwaynaha iyo shucuubta kala duwan ee Itoobiya ka daaleen kooxda dhiig-miiratada ah ee
Hadaba shirka gudiga fulinta ee Isbaahaysiga Shacabka ee Xoriyada iyo Dimuqraadiyada (PAFD) oo lagaga hadlay arimo badan oo khuseeyey isbaahaysiga, geeska africa iyo caalamkaba ayaa ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan.